देश र जनतामाथी दलहरुले गरिरहेका गद्दारी हामी जनताले कहिले सम्म सहने ?
बासु देब न्याैपाने २०७७ पौष २८ गते मंगलबार ०८:२२:५५ मा प्रकाशित
काठमाडौँ। प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगलाई पार्टी आधिकारिकताको विवादमा संविधान, कानुन, ऐन र विधिको आधारमा निर्णय लिन आग्रह गरेको छ। हिजो लिखित पत्र लिएर अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे, लिलामणि पोखरेल, रामनारायण विडारी र कृष्णभक्त पोखरेल आयोग पुगेका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले ओलीलाई कसरी अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेको छ ।
‘तपाईंहरुले केका आधारबाट उहाँहरुले बुझाएको कागजपत्रहरु सहज रुपमा लिनुभयो रु’, नेपालले प्रश्न गरेका थिए । ओली समूहले ल्याएको पत्र अध्ययन नै नगरी दर्ता गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । ‘पार्टीको विधानले १० प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, तर ११९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको विवरण कसरी बुझ्नु भयो ?’, उनले प्रश्न गरेका थिए । कानुनअनुसार, प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जबाफ दिए।
एक पक्षले अर्को पक्षलाइ धम्काउने , गालीगलौज गर्ने अनि एकले अर्कालाइ गल्हत्याउने जस्ता नाटकीय शैलीको अन्त्य कहिले होला?
दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण देश नै बर्बाद भैसकेको छ। देश र जनतामाथि दलहरुले गरिरहेका गद्दारी हामी जनताले कहिले सम्म सहने ? वास्तबमै देशमा एक जना वास्तविक हिरोको खाचो छ जो साच्चै देश र जनताका लागि काम गर्ने होस। तर हामिले वास्तविक हिरोको पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौं । देश नै बेचेर खाने दलहरुको कहिले सम्म बिश्वास गरेर बस्नु पर्ने हामी? अब त परिबर्तनका रेखाहरु कोरिन्छ्न कि भनेर आस गर्दा गर्दै दसकौ दसकौ बितेको पनि पत्तै भएन। देशमा ब्यबस्था मात्र बदलियो तर अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै । २0४६ साल देखि २0७७ साल सम्म कति जना प्रधानमन्त्री भए होलान ? मुल्यांकन गरौं त। तर यस्तो लाग्द छ कि २0४६ सालको जुन अवस्थामा रहेको मेरो देश आज २0७७ सालमा पनि उस्तै उस्तै छ ।
दलहरुको झगडाभित्र कतै पनि सिद्धान्तका कुराहरु छैनन। जनताका दुख र पिरका कुराहरु छैनन । चिनिमिल बाट ठगिएका गरिब किसानका कुराहरु खै? मिचिएको सिमानाको कुराहरु खै? सिटामोल नपाएर मर्न बाध्य जनताका कस्टकर जिबनका कुराहरु खै? बेरोजगारीले सताएको युवाहरुको सम्बोधनका कुराहरु खै? देश परिबर्तनका विषयहरु खै? देशलाई प्रचुर समृद्धिमा लैजान सकिन आधारहरुका कुराहरु खै ? विकासका ठुला ठुला परियोजनाका कुराहरु खै? भ्रस्टाचारिलाइ कारबाहीका कुराहरु खै? बेचिएका चेलीबेटीका उद्दारका कुराहरु खै? स्वाभिमानका कुराहरु खै? दैनिक रुपमा परदेश बाट बाकसमा फर्किने ३\_४ थान राता बाकसका कुराहरु खै? दलभित्र केबल कसले कति खायो र कसले धेरै खाने विषय भन्दा अरु मुद्दा छैनन । र यो प्रक्रिया सदियाैँ देखि चली आएको छ। अनि हामी जनता कहिले सम्म चुपचाप चुपचाप सहेर बसि रहनु पर्ने ?
जनताको मतलाई गल्हत्याउनेहरु,जनताको मतको कदर नगर्नेहरु आज फेरिपनि मुलुकलाई बर्बादी र अस्थिरता तर्फ धकेलेर सडकमा भोट माग्न निस्किएका छन। अब हामी जनताले यिनीहरुलाइ चिन्न जरुरी छ , यिनीहरुलाइ जनताले लखेट्न जरुरी छ छ । अब पनि हामी जनताहरु सचेत नभएमा देश ठूलो दुर्घटनमा जाने सँकेत देखिएको छ । अब हामी युवा पार्टीको हैन देशको झण्डा बोक्ने की ?